တောကြောင် - ဝီကီပီးဒီးယား
Distribution of the jungle cat in 2016
Felis catolynx Pallas, 1811
F. erythrotus Hodgson, 1836
F. rüppelii von Brandt, 1832
F. jacquemontii Geoffroy Saint-Hilaire, 1844
F. shawiana Blanford, 1876
Lynx chrysomelanotis (Nehring, 1902)
တော‌ကြောင်ကို ဇီဝ‌ဗေဒအလိုအရ ‘ဖဲလစ်‌ကေးအပ်’ဟု ‌ခေါ် သည်။ ‌ကိုယ်အရွယ်အစား အလယ်အလတ်ရှိသော ကြောင်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ တောင်အာရှ၊ အရှေ့တောင်အာရှနှင့် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း တို့တွင် တွေ့ရသည်။ စိမ့်တောများတွင် ကျက်စားသည်။
သားမွေးမှာ သဲရောင်၊ နီညိုရောင် (သို့မဟုတ်) မီးခိုးရောင် တပြင်တည်းရှိပြီး အ စက်အပြောက် မရှိပေ။ မိတ်လိုက်ရာသီနှင့် ရင်သွေးကိုစောင့်ရှောက်နေသော မိခင်တောကြောင်မများမှလွဲလျှင် များသောအားဖြင့် တစ်ကောင်တည်း နေတတ် ကြသည်။
၂ တွေ့ရှိရာဒေသနှင့် ပျံ့နှံ့ကျက်စားပုံ
ခေါင်းနှင့်ကိုယ်သည် အရှည် ၂ ‌ပေ‌ကျော်ခန့်ရှိ၍ အမြီး သည် တစ်‌ပေခန့်ရှည်သည်။ ကိုယ်အ‌လေးချိန်မှာ ၁၀ ‌ပေါင်နှင့် ‌ပေါင် ၂၀ ကြားတွင်ရှိတတ်သည်။ ‌တော‌ကြောင်သည် ‌ခြေတံ ရှည်၏။ သို့‌သော် အမြီးတိုသည်။ အစိမ်း‌ရောင်သန်း‌သော မျက်စိများသည် ကြမ်းကြုတ်‌သော အမူအရာကို ‌ဖော်ပြလျက်ရှိ ‌လေသည်။ အ‌မွှေးသည် မွဲပြာ‌ရောင်မှ အဝါနှင့်မွဲပြာ‌ရောင် ‌ရော ထား‌သောအ‌ရောင်ထိ အ‌ရောင်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်။ အမြီးတွင် အမည်း‌ရောင်ကွင်းများရှိ၍ အမြီးဖျားသည်မည်း၏။ ‌ခြေဖျားများ သည် အဝါနု‌ရောင်ဖြစ်၍ ‌ခြေဖဝါးများသည် အမည်းသို့မဟုတ် အညိုပုပ်‌ရောင်ဖြစ်သည်။ နားရွက်များသည် နီ၍ အဖျားရှိ အ‌မွှေးက‌လေးများသည် မည်း၏။ ကိုယ်၏‌အောက်ပိုင်းမှာ အ‌ရောင်ပို၍ ‌ဖျော့သည်။ ထို့ပြင် ကိုယ်၏‌အောက်ပိုင်းနှင့် ခါးပိုင်း၏နံ‌ဘေးတွင်လည်း အစင်းများရှိသည်။
တောကြောင်သည် အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံများတွင် တွေ့ရသော ကြောင်ရိုင်းတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အိန္ဒိယတိုက်ငယ်၊ အာရှအလယ်ပိုင်း၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ သီရိလင်္ကာနှင့် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းတို့တွင် တွေ့ရသည်။‌ ‌တော‌ကြောင်နှင့် မျိုးချင်းတူ ‌သော်လည်း ကိုယ်‌နေ အချိုးအစားနှင့် အ‌မွှေးအ‌ရောင်ချင်း မတူ သော အခြား‌တော‌ ကြောင်မျိုးများလည်း ရှိ‌သေးသည်။
‌တော‌ကြောင်သည် ‌ခြောက်‌သွေ့‌သောအရပ်များတွင် ‌နေထိုင် ‌လေ့ရှိသည်။ အများအားဖြင့် မြက်‌တော၊ ချုံ‌တောနှင့် ကိုင်းထူ ထပ်‌သော မြစ်ကမ်းပါးများတွင် ‌နေ‌လေ့ရှိသည်။ နံနက်နှင့် ည‌နေခင်းတွင် အစာရှာ ထွက်‌လေ့ရှိသည်။ ကွင်းထဲ၌ ‌တော ‌ကြောင် သွားလာ‌ရွေ့ရှားပုံသည် ကျားသစ်သွားလာပုံနှင့်တူ၏။ နို့တိုက်သတ္တဝါက‌လေးများနှင့် ငှက်များကို အစာအဖြစ် ဖမ်း ယူစား‌သောက်သည်။ မြို့ရွာအနီးသို့ ‌ရောက်ရှိလာ‌သောအခါ အိမ်၌‌မွေးမြူထား‌သော ကြက်၊ ဘဲတို့ကို ဖမ်းယူစား‌လေ့ရှိသည်။
အလွန်လျှင် မြန်သန်စွမ်းလှသဖြင့် သူ့ထက်ကြီးမား‌သော သားကောင်များကိုပင် ဖမ်းယူနိုင်‌လေသည်။ ‌တော‌ကြောင်‌ပေါက် ပွားပုံနှင့်စပ်ဆိုင်‌သော အ‌လေ့အကျင့်ကိုမူ အတိအကျမသိရပေ။ သို့သော် တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်သား‌ပေါက်သည်ဟုဆို သည်။ ‌တောကြောင်က‌လေးများကို အိမ်‌ကြောင်များကဲ့သို့ ယဉ်ပါး‌အောင် ‌မွေးမြူနိုင်သည်။ အချို့အရပ်များတွင် ‌တော‌ကြောင်ကို ဟင်းလျာအတွက် ဖမ်းဆီး‌လေ့ရှိကြသည်။ 
F. c. furax de Winton, 1898
F. c. nilotica de Winton, 1898
F. c. maimanah Zukowsky, 1915
F. c. oxiana Heptner, 1969
Caucasus, တာကီစတန်, အီရန်နိုင်ငံ, Baluchistan and Yarkand, East Turkestan, ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ, အစ္စရေးနိုင်ငံ, southern ဆီးရီးယားနိုင်ငံ, အီရတ်နိုင်ငံ, အီဂျစ်နိုင်ငံ; northern အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ and south of the Amu Darya River; along the right tributaries of the Amu Darya River, in the lower courses of the Vakhsh River ranging eastwards to the Gissar Valley and slightly beyond Dushanbe.
F. c. kutas Pearson, 1832
F. c. kelaarti Pocock, 1939
F. c. prateri Pocock, 1939
F. c. valbalala Deraniyagala, 1955
တောင်အာရှဒေသ။ ဟိမဝန္တာ တောင်တန်း ranging from ကက်ရှမီးယား and နီပေါနိုင်ငံ to ဆစ်ကင်, ဘင်္ဂလား westwards to ကွတ် and ယူနန်, southern India and သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ
F. c. fulvidina Thomas, 1929 အရှေ့တောင်အာရှဒေသ။ ranging from မြန်မာ and ထိုင်း to လာအို, ကမ္ဘောဒီးယား and ဗီယက်နမ်
↑ ၁.၀ ၁.၁ Gray, T.N.E. (2016). "Felis chaus". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN.
↑ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M., eds. (၂၀၀၅)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
↑ Gray, T.N.E.; Timmins, R.J.; Jathana, D.; Duckworth, J.W.; Baral, H.; Mukherjee, S. (2016). "Felis chaus". IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-3. International Union for Conservation of Nature.
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ Ellerman၊ J.R.; Morrison-Scott၊ T.C.S. (1966)။ "Felis chaus Güldenstädt 1776"။ Checklist of Palaearctic and Indian Mammals 1758 to 1946 (2nd ed.)။ London: British Museum of Natural History။ pp. 306–307။
↑ Zukowsky, L. (1914). "Drei neue Kleinkatzenrassen aus Westasien" (in de). Archiv für Naturgeschichte 80 (10): 139–142.
↑ Geptner, V. G.; Sludskij, A. A. (1992) ။ "Jungle Cat"။ Mlekopitajuščie Sovetskogo Soiuza. Moskva: Vysšaia Škola [Mammals of the Soviet Union. Volume II, Part 2. Carnivora (Hyaenas and Cats)]။ Washington DC: Smithsonian Institution and the National Science Foundation။ pp. 356–398။
Wikispecies: Felis chaus
Fauna Europaea: 305359
Fauna Europaea (new): 3894d1f5-2f13-48f2-b6fc-b36a501dcf56
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောကြောင်&oldid=710320" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။